लक्षणविहीन कोरोना संक्रमित ८४ प्रतिशत – Koshidaily
access_alarms Koshi daily ९ बैशाख २०७७, मंगलवार ०२:५८	chat_bubble_outline 0	Comments
सबैभन्दा बढी संक्रमित १३ जना विराटनगरको कोसी अस्पतालमा छन्। अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्रका अनुसार त्यहाँ सबै सक्रमित ‘स्वस्थ’ छन्। उनीहरूमा कोभिड–१९ को कुनै लक्षण देखिएको छैन। ‘उहाँहरूले कुनै प्रकारको शारीरिक अस्वस्थता पनि अनुभव गर्नुभएको छैन,’ डा. मिश्रले भनिन्।
कोसी अस्पतालमा २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १० जना छन्। अरू ३४ वर्ष, ४० वर्ष र ६५ वर्षका छन्। कोसीपछि सबैभन्दा बढी बिरामी सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चल अस्पतालमा चार जना उपचाररत छन् भने एक जना निको भएर गइसकेका छन्। भर्ना भएका पाँच जनामध्ये चार जनामा कोभिड–१९ को लक्षण नदेखिएको अस्पतालका डा. शेरबहादुर कमरले जानकारी दिए।